Tao Gangafani sy Yoro no nitrangan’ izany fanafihana izany ny alatsinainy lasa teo, ary fantatra fa mpikambana ao amin’ny foko “Dogon” avokoa ny ankamaroan’ireo niharamboina tamin’izany. An-jatony kosa no fantatra fa isan’ ireo nanafika tamin’izany. Nanapahan-kevitra ny governemanta any an-toerana fa hampitomboina ireo tafika mba hanampiana ireo olona niharam-boina. Raha ny tatitra nataon` ny Firenena Mikambana dia olona 750 no fantatra fa nandao ireo tanàna ireo ka nifindra any Dinagourou mpifanolo-bodirindrina aminy. Misy ihany koa no nifindra monina any Burkina Faso.